Ku dar File Cinwaan in Video
> Resource > Video > Sidee ayaan ku dari kartaa subtitles in My Videos 001
Ma ahan oo kaliya videos online bixi aan la iman subtitles. Dhab ahaantii, waxa kale oo aad ku dari kartaa subtitles in DVD-aad. Taasi waa run gaar ahaan marka film oo kaliya loogu talagalay oo ah luuqado dhawr iyo ma iyaga ka mid ah waa waxa aad raadineyso weeyna. Taasi waa mid dooro, in qaar ka mid ah asxaabta aan leeyihiin; tusaale ahaan daawashada Manga ah (cartoon Japan) in uu ku aaday kooxda audio asalka Japan, laakiin Cinwaan yimaado laga yaabaa kaliya in English.
Maxay ku saabsan dadka u jeclaan lahaa in luqadaha French, Portugal, Talyaani ama wax kale? Waxaa suurtagal ah in download faylasha Cinwaan (qaab file ah .srt ah, .ass ama .ssa) hore ka dibna waxa ay sii kordhineysaa video wareeji. Ha ii tuso sida waxaa la samayn karaa oo keliya dhowr talaabo oo sahlan ula Wondershare Video Converter Ultimate .
Talaabada 1: Jiid-iyo-hoos u dhac video files
Marka aad soo bixi oo lagu rakibay Video Converter Ultimate ah, si fudud u jiidi-iyo-hoos u aad video files gal interface ka. Haddii aad u baahan tahay si ay ula qabsadaan video ee aad heerka jir ama heerka yara, guji kaliya Settings rukun-xaq u hooseysa interface ka. Ha illoobin inaad dhigay halka aad rabto doonaa si uu u badbaadiyo file video final ka Folder Output rukun bidix ugu hooseysa interface ka.
Tallaabo 2: Ku dar subtitles in video (oo aan wax video tafatirka)
Sida lagu muujiyey in shaashadda hoose, si ay u sii wadi dar Cinwaan ka menu hoos-hoos. Just dooro hore soo bixi faylasha aad Cinwaan in uu la badbaadiyay rogtid oo aad PC. Haddii aad u baahan tahay in aad xaalkaa videos waqti isku mid ah ka hor inta ku daray subtitles in video ah, fadlan raac Tallaabada 3.
Tallaabo 3: Ku dar subtitles in video (la video tafatirka)
Marka aad soo jiitaa-iyo-hoos u aad video files gal Converter ku tusiyo in Tallaabada 1, guji Edit in ay galaan screen tafatir ah. Waxaad jar karo iyo qabsato xuduudaha aad video sida ka hor inta aadan sii si ku daray Cinwaan. Haddii aadan u suurtagashay in ay soo bixi faylasha Cinwaan ka hor, waxa aad si fudud u isticmaali kartaa Search Cinwaan feature in uu la dhisay-in aad sahlo. Ka dib markii in, ay sii wadaan in ay tallaabada xigta.
Talaabada 4: Dooro qaab wax soo saarka ah ee video files
Dooro qaab wax soo saarka aad ku salaysan qaybaha hir abaabulay, ama haddii aad tahay qof hubin qaab wax soo saarka, kaliya ha Video Converter Ultimate go'aan qaabka ugu wanaagsan iyo goobaha adiga ku matalaya. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay si ay u go'aansadaan habka aad ka doorbido ee loo maqli karo ama nooca iyo moodelka qalab. Ma aha in qabow? Download version maxkamadda hadda oo aad noqon doonaa dhicin qaababka kale ee muhiimka ah in ay yihiin bac la geliyaa, taasi kama dambaysta video Converter!